Maxamed Cabdirisaaq Diriye | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Magaca Buugga: Safiirka Qoraha: Peter Bridges Turjumidda iyo Soo koobidda: Kamaal Marjaan Daabacaadda: Hiil Press Buugga Safiirka waa buug uu qoray danjire Maraykan ah oo la dhihi jiray Petter Bridge, wuxuu Soomaaliya ka shaqaynayey muddadii u dhaxaysay 1984-tii illaa 1986-dii. Hase ahaatee wuxuu sawir buuxa ka bixinayaa siyaasaddii Soomaaliya intii ka danbaysay xoriyadda. Dhanka kale wuxuu daah-qaadayaa siyaasaddii arrimaha dibadda ee Maraykanka, wuxuu muujinayaa hardinkii ka dhaxeeyey Maraykanka iyo Midowgii Soofiyeeti. Waxaan ka dheehday aqoon baaxad leh oo si gundheer u faarfaareysa duruufihii iyo fursadihii ku dahaarnaa siyaasaddii milatariga oo uu hoggaaminayey Maxamed Siyaad Barre iyo xaaladihii nololeed shacabka Soomaaliyeed …
Cabdilaahi Maxamed Maxamuud known as Cabdilaahi Qarshe was in born the outskirts of Moshi, Tanganyika (letter on Tanzania) in 1924. He had four brothers and one sister. His father was a trader and a Businessman in East Africa. He was regarded as frugal and fortune businessman. Originally he migrated from Sanaag region, Somalia. In that time men used to travel to East Africa for work and better lives. Qarshe was a nickname of Abdallah’s father. Mohamed’s family hailed from Maydh district, they were respected as shrine keepers of sheikh Ishaaq. They were involved the fish industry, exportation of livestock and …
Bayaan loogu magac-daray manifesto 2 oo ay saxiixeen todobaatan qof oo isugu jira siyaasiyiin, waxgarad, aqoonyahaniin, qoraayaal, macalimiin jaamacadeed iyo indheergarad ayaa lagu dalbanayaa badbaado qaran. Waxay ku baaqayaan in la badbaadiyo siyaasadda waddanka oo ku sii dhacay haadaan dheer. Saddon sano ka hor (May, 1990) ayeey ahayd markii la soo saaray bayaankii kowaad(Manifesto-1) oo in kabadan boqol qof oo aan cidina ka maqnayn ay ku baaqeen badbaadinta waddanka oo ka sii lalmanayey loolli qaxaabo badan. Cidi se dhag jalaq uma siin oo dacartii waa innaga illaa hadda muudsanayna. Markii indho daahfuran oo ka madax banaan indho mucaarad iyo mid …
Samanadaan danbe waxaa sii dhumaya milgihii ay lahayd xulashada lamaanaha, wuxuu isugu sii dhuranayaa mid ku kooban waan ku arkay waankaa helay. Guurkii Soomaalidii hore wuxuu ahaa mid amin dheer qaata dhisidiisu, xulashada gayaankuna wuxuu lahaa halbeeg lagu miisaamo oo dhinacyo badan, ma ahayn mid ku kooban waji iftiimaya iyo muuqaal se’ waxaa laga beegaal qaadan jiray garashada, garaadka, dulqaadka, xurmada, quruxda, diinta, qoyska ay ka soo jeeddo gabadha aad la wadaageysid haasaawaha. Gabaygii abwaan aw yuusuf waxaa ka mid ahaa, “Guduud looma raacoo haween, gabalba waa cayne Bidhaan gebi ka laalaadda waa, lagu gulaalmaaye”. Rag iyo dumar ba xulashada …
Sidii hadba albaab waxbarasho iiga soo xirmayey. Hadda waxay u egtahay in uu kii ugu danbeeyey iga soo xirmay, balse intii naftu igu jirto firig-firig dayn mayo oo hadba meel baan saloolan bal inaan arko fursad kale. Shan sano ka hor waxaa naga xirmay iskuulkii magaalada oo dhan indhaha u ahaa. Ardada waxii xiisaynayey waxbarasho waxay noqdeen fiin firirtay, intii aan heli karin qoys ama meel kale oo ay waxbarashada kasii wadan-kareen gabbal baa u dumay, waxay noqdeen inay weheshadaan waxbarasho la’aan. Waxaan galay sahan waxbarasho. Naftayda kaliya ma ahane dadkale baa iga war sugayey. Markaan imid magaalada caasumadda u …
Farriinta ay bixiyaan muuqaalada iyo sawiradu waa ay ka awood iyo saamayn badan tahay farriinta cod ama qoraal ahaan lagu gudbiyo. Muuqaalku wuu geli ogyahay maanka qofka, wuuna ka maan-ku-har dheer yahay farriimaha kale ee loo gudbiyo qaababka kale. Hal sawir ayaa gudbin kara farriin qoritaankeedu buuxinayo waraaqo badan. Haddii aad qof isbarataan, waxaad maskax ahaan isku guntaysaa muuqaalkiisa iyo magaciisa, haddii aad muddo ismoogaataan, waxaad isku gunudday waa ay kala furanayaan, waxaa dhumaya magacii laakiin maskaxdaadu waxay la haraysaa muuqaalkii. Intee qof ayaad xasuusataa wajigooda oo aad xoortay magacoodii?! In badan ayaad maqashay amase tiriba ‘wajigaagu wuu igu yaallaa’. …
Magaca Buugga: WAALID-KAAB Qoraha dhiganaha: Saamiya Salaan Nuur Waxaan diiradda saarayaa mugga iyo macnaha uu buuggaan xambaarsanyahay kama hadli doono habka qoraalka dhiganaha. Dhigganahaan oo ka kooban sagaashan iyo labo bog waa buug ka hadlaya toosinta iyo tarbiyeynta toolmoon ee ilmaha. Waa buug waalidiinta iyo dadka kaleba ee carruurta la nool baraya habka ugu wanaagsan ee loo tabbabari karo ilamaha. Waa dhigane inoo sahlaya yagleelidda bulsho cusub oo ka duwan Soomaalida maanta. Shey kasta oo la unkayo waxaa laga soo dhisaa gunta iyo seeska si uu u noqdo mid waxtar leh. Haddii la hagaajiyo ebyidda aasaaska shey walba, sheygaas wuxuu …